Ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni kusuka konjiniyela abangaziwa ku-MacOS Sierra | Ngivela kwa-mac
Ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni kusuka konjiniyela abangaziwa ku-MacOS Sierra
U-Ignacio Sala | | macOS Sierra, Izifundiswa
Ngaso sonke isikhathi lapho bobabili iMicrosoft kanye neApple bethula uhlobo olusha lohlelo lwabo lokusebenza, ngaphezu kobuhle nobuhle bokusebenza ukuze abasebenzisi bangalahlekelwa yintshisekelo kuzo, izinkampani zihlala zizama ukuqinisekisa ukuphepha kwethu. Futhi njengobufakazi balokhu sinezibuyekezo eziqhubekayo ezikhishwa njalo ukuze sikwazi ukuxazulula noma iyiphi inkinga yokuphepha edlule, yamanje noma yesikhathi esizayo. Kodwa futhi shintsha izinketho ezithile zohlelo lokusebenza ukuze ususe izinketho lapho ufaka noma wenza izinguquko ohlelweni. IMacOS Sierra itholakale ukulanda izinsuku ezimbalwa manje.
Ngaphezu kwazo zonke izindaba esiziphawulile kaningana, kusilethela umkhawulo ohlanyise abantu abaningi futhi lokho asisakwazi ukumaka ibhokisi lokho kusivumela ukufaka izicelo ezingaziwa zomuntu wesithathu.
Ngokusobala i-Apple ikwenzela ukusizuzisa, kepha lapho sifuna ukufaka uhlelo lokusebenza oluncane lweGithub, ukunikeza isibonelo esisheshayo nesicacile, iMacOS Sierra isiphonsa umyalezo wokuthi akunakwenzeka ngoba unjiniyela akaqinisekisiwe. Okuthi ekuqaleni kungasiphoqa ukuthi senqabe leso sicelo.
Ngenhlanhla singasebenzisa iTheminali ukususa lowo mkhawulo nokuthi ivela futhi esigabeni Sezokuphepha Nobumfihlo kokuthandwa yi-MacOS Sierra.
Faka izinhlelo zokusebenza ezivela konjiniyela abangaziwa ku-MacOS Sierra
Ukuze senze lokhu, okokuqala kufanele Isikhumulo esivulekile bese ufaka umyalo olandelayo. Ukuvula iTheminali kufanele siye kwisikhulisi sosesho esisemenyu engenhla, ngakwesokudla kwesikrini bese ubhala iTheminali.
iso! phambi kwenkosi kukhona odwi ababili (- -) Okulandelayo kufanele siqale kabusha iSitholi ngomyalo olandelayo.
Manje kufanele siye kokuncamelayo kwesistimu> ukuphepha nobumfihlo kanye sizophinda sithole inketho lokho kusivumela ukuthi sifake izicelo zenkampani yangaphandle ngaphandle kokukhonjwa ngaphambili yi-Apple.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni kusuka konjiniyela abangaziwa ku-MacOS Sierra
Akungisebenzeli, ngemuva kokufaka ikhodi yokuqala icela iphasiwedi, ngiyifaka bese ngifaka eyesibili, eyesibili inginika lo myalezo:
Azikho izinqubo ezifanayo zakho ezitholakele
Yini engiyenzayo engalungile?
Phendula ukuze uqede28
Kufanele ukopishe umyalo we-athikili bese uwunamathisela esigungwini, into ozoyishiya usendleleni.
Umyalo wokugcina kufanele ubhalwe maqondana necala eliphezulu nelingaphansi.
UGonzalo Guirao Perez kusho
Kimi kungenzeki, kunginikeza iphutha le-Sudo.
IGonzalo-Guiraos-iMac: ~ gonzaloguirao $ sudo spctl -– master-khubaza
I-sudo: ayikwazi ukwenza i-stat / etc / sudoers: Imvume inqatshiwe
Sudo: ayikho imithombo evumelekile yabathandi, ethola ukuyeka
Sudo: ayikwazi ukuqalisa i-plugin yenqubomgomo
Phendula uGonzalo Guirao Perez
Sawubona! Iphutha ukuthi ukubeka "ngaphambili" kwenkosi yimibhalo emibili futhi "kungaphambi" kwenkosi. Le ndlela ibingabukeka kanjani ikhodi ye-sudo spctl -master-disable
Isinyathelo sesibili asisebenzi kimi
Kopisha bese unamathisela imiyalo evela ku-athikili ku-terminal. Kufanele sihloniphe icala eliphezulu nelincane.
UCristian Contreras kusho
izosebenza nezinhlelo zokusebenza zohlobo lwe-Keygen?
Phendula uCristian Contreras
Ilungile, phakathi kwezinye izinto.
UCedric Cartwright Rivera kusho
Isebenzile kahle kimi, izolo nje ngiyibonile le nkinga kepha anginaso isikhathi sokuyibheka futhi namhlanje ekuseni ngithole isaziso sendatshana yakho, ngiyabonga kakhulu!
Phendula uCedric Cartwright Rivera
Nami benginenkinga efanayo izolo futhi kungithathe isikhathi eside ukuthi ngiyixazulule futhi njengoba bekungimi ngedwa onale nkinga nginqume ukuyishicilela. Ngiyajabula ukuthi kube wusizo.
Engikwenzayo yilokhu okulandelayo.
1. Zama ukufaka uhlelo lokusebenza olungasayiniwe
2. Ngemuva komyalezo wephutha oweluleka ukuthi uNowa uyakwazi ukufaka, iya enketho yezokuphepha nobumfihlo.
3. Ngezansi kwezinketho zokufaka ama-Apple apps nonjiniyela abasayiniwe, kuvela umyalezo okhombisa ukuthi uhlelo lokusebenza alufakwanga ngoba belungasayiniwe futhi libuza ukuthi ngabe sifuna ukufaka noma kunjalo
4. Ngokusobala chofoza yebo, bese ufaka ngaphandle kwezinkinga.
Ngiyethemba iyakusebenzela. Labo abangathandi noma abangalokothi baphazamisane ne-terminal.
UDaniel Ramirez Mesa kusho
Ngokusobala kukhona okusasilele, ngoba ngizama ukusebenzisa i-x-force ye-adobe cs2015 futhi ivala ngokushesha, ngabe kwenzeka into efanayo komunye umuntu?
Phendula uDaniel Ramirez Mesa
Kwenzeka into efanayo kimi ngizama ukufaka iSketchBookPro 2016.
Ngenze izinyathelo ezikhonjisiwe futhi ngibona ushintsho kokuncamelayo, manje sengingavula futhi ngifake noma yiluphi uhlelo lokusebenza, kepha i-xforce ayivuli !!
UNGAKWAZI UKUXAZULULA?, KANJANI?
Ngize nje ukuzokubonga, bengivele nginesithukuthezi sokuthi nginike imvume yokufaka isicelo sasekhaya
Nginenkinga efanayo ne-x-force. Endabeni yami ngino-2014 kuphela, angitholanga ukuthi ngingalanda kuphi (ngokuzethemba okuthile) i-keygen
Nginezinto ezimbalwa futhi kwenzeka kimi ngakho konke. Ngiphelelwe yithemba, angazi ukuthi ngingayixazulula kanjani. Ngabe kukhona owaziyo okuthile?
Angikwazi ukusebenzisa i-keygen ukuqeqesha kwi-mac sierra… noma ubani wazi okuthile ??
ukwazile ukusebenzisa i-keygen nge-mac sierra?
i-francisco serrano kusho
Sawubona, okokuqala nje, ngiyabonga kakhulu ukuthi ngangikhungathekile, bengicabanga ukuthi yimina kuphela,
Ngilandela incazelo, ngibeke umyalo noma kunjalo, nganamathisela ukuthi ilahlekile eyodwa - kukhona emibili -
Njengoba usho, ngiyibekile ngokuyibhala, ingicela iphasiwedi, ngiyibeka kodwa akukho okungaveli namanje
Lelo bhokisi, futhi kuthiwani ngokuqala kabusha kwesitholi ngomyalo olandelayo, usho muphi umyalo noma umane umane
qalisa kabusha ikhompyutha, mhlawumbe yilokho engikwenzayo okungalungile. Ngiyabonga ngakho konke
Phendula i-francisco serrano
Angikwazi ukuqhekeza i-AutoCAD 2016 noma iSketchup. HELPAAA (yeka ngokungalindelekile)
Enye indlela yokukwenza kungaba ngokuchofoza kwesokudla bese ukhetha u- "open". Okungenani kungisebenzele. Ngiyethemba kuyasiza umuntu. Sanibonani.
Isebenza kahle. Okungabasebenzeli ukuthi ezinye izinhlelo zokusebenza AZIHAMBI ne-MacOS Sierra (kufaka phakathi ama-Keygens abo, njll).
Awunamahloni okuba nedivayisi ENKULU efana neMac, nokuthi ufake ubugebengu obucwengekile?
UMarco Martin kusho
Ukuba nekhompyutha ye-Windows, ebiza u- € 1500 kulungile, noma ngabe unezinhlelo zokuphanga ezibiza i- € 120, 250, njengezinguqulo ezahlukahlukene ze-MS Office.
Kepha qaphela, uma une- € 1500 Mac futhi kufanele usebenzise i-AutoCAD (ebiza u- € 4000) kufanele ube namahloni okuyigqekeza, akunjalo?
Angijwayele ukusebenzisa isoftware ebunjiwe, kepha angikwazi ukusebenzisa ama-euro angama-4000 kuhlelo engilusebenzisa kancane futhi angikwazi ukwethula amaphrojekthi nge-watermark ethi "AutoCAD yabafundi" ... ngakho-ke i-keygen nesikhathi.
Yeka ukuthi kuhle kanjani ukwahlulela futhi ungacabangi.
Phendula uMarco Martin
Ukubulala umuntu njalo ngesonto, minyaka yonke, noma kanye nje empilweni kuseseyicala. Ngakho-ke ufana nepirate uma uyisebenzisa "ngezikhathi ezithile."
Sawubona mngani, ngiyabonga ngomnikelo wakho, ngiyakutshela ukuthi awuzange ungisebenzele, ngizama kwi-MacOS Sierra futhi ngokusobala kufanele ngicishe i-System Integrity Protection futhi bathi kufanele uqale kabusha nge-Alt futhi ngayo izosebenza collect sebenzisa i-terminal bese ubhala csrutil khubaza kepha lapho uqala kabusha nge-Alt, ayinginiki noma iyiphi inketho yokuthola kabusha ... Ungaba nenye indlela yokukufeza, noma ukhombise indlela eyiyo yokukwenza? Ngiyabonga!
Ngiyixazulule kanjena ... Faka i- "El Capitan" ngeHhovisi, iSketchup, i-Photoshop ne-Autocad (Yonke ipirate esobala). Thuthukela e-sierra futhi zonke izinhlelo zihamba kahle. Ngenkathi bethola esinye isisombululo ngicabanga ukuthi bangasenza kanjena, Sanibonani.
Uhlobo lwe-Screenflow 5 alusebenzi eSierra kanti inguqulo 6 ibiza ama-euro angama-99 ku-AppStore. Kuyihlaya?
Efe Uves kusho
Iphinde yangicela iphasiwedi, ngayixazulula ngokususa okwesikhashana iphasiwedi yomsebenzisi futhi ngakwazi ukwenza imiyalo ngokuqondene nalokho okunconyiwe kule ndatshana, ngisebenzisa inketho ebengiyifuna kakhulu, engivumele ukuthi ngivule uhlelo ebengiludinga.
Ngiyabonga kakhulu Ignacio
Phendula ku-Efe Uves
UMax Jhader Palomino Meza kusho
Uxolo lo mbuzo, wenze kanjani ukususa iphasiwedi? Ngiyazama kepha angikwazanga ukususa iphasiwedi, ngicela ungisize
Phendula uMax Jhader Palomino Meza
Sawubona! Ignacio! Siyabonga ngokuthunyelwe, okuwukuphela kwento ukuthi udideke kancane kubo bonke ababeka - "ngaphambili" kwenkosi. Esikhundleni salokho, kungukuthi "ngaphambi" kwenkosi, ngakho-ke ihlala ingu-master. Labo abakopishe ikhodi yeposi, ababonakali bebabili -, kodwa "- master-disable" (ideshi ende).
Ikhodi yile: Sudo spctl -master-disable
Ngiyabonga! Isebenza kahle
Hitch taylor kusho
Ungangiqondisa ukususa isithonjana kubha yemenyu? awukwazi nge-cmd bese uyihudula futhi ayiveli kokuncamelayo kohlelo, noma kuzinhlelo zokusebenza nakuqapha komsebenzi okususa ifayela elibizwa nge-LTtray liyasuswa kepha liyavela ngemuva kwemizuzwana embalwa
Phendula uHitch Taylor
lokhu kusebenza ngokuphelele Sudo spctl -master-khubaza # system master switc
U-Alfredo Vieira kusho
Ngizamile kepha akusebenzi kimi. Lapho ngifaka iKillall Finder, kubonakala sengathi iyayemukela, kepha lapho ngiya kokuncamelayo kweSystem kuhlala kunjalo, ngaphandle kwezinguquko.
Phendula u-Alfredo Vieira
U-Aline Flores kusho
Ngiyabonga kakhulu, ngithola inketho yokuthi "Noma iyiphi iSayithi" manje hamba uma ngikwazi ukuvula i-x-force ukufaka i-AutoCAD kahle, isincomo esihle
Phendula ku-Aline Flores
Nginenketho ethi "Noma Yiphi Indawo" kodwa angikwazi ukuvula amandla e-X ukufaka i-AutoCAD 🙁
Umbhali we-iBooks uvuselelwa enguqulweni engu-2.5 ngezifanekiso ezintsha nezinsizakusebenza
Izinkinga zokuphepha kweDropbox zilungisiwe kwi-MacOS Sierra entsha